सहनशील सुशील र सुशीलाहरु ~ brazesh
September 27, 2018 नेपाली, फाइँफुट्टीराज No comments
दशैं आउन लागेको छ । दशैं चाहिँ पक्कै आउँछ । भनेको समयमै आउँछ अब । हो मेलम्चीको पानी, स्याटेलाइटको बिजुली, चुच्चे रेल, स्वदेशमै खनिएको इन्धन र सम्बृद्धिजस्तो अनिश्चिततामा मात्र नभएर वास्तविकतामै पनि आउँछ दशैं । सोह्रश्राद्ध शुरु भएसंगै वर्षा पनि अब प्रतियोगिता खेल्न विदेश गएको खेलाडि र साँस्कृतिक कार्यक्रमको लागि गएको कलाकारजस्तो हुन थालेको छ । फाफुरा पनि पर्वोल्लासले आल्हादित भएर, दंग परेर रत्नपार्कको चौरमा टोपीले मुख छोपेर ‘सनवाथ’ लिइरहेको छ । वातावरण चाडमय छ । आज फाफुराको मगजमा एउटा प्रश्न फुरेको छ जुन तपाईंहरुलाई पनि सोधौं कि भन्ने लागिरहेको छ । तपाईंहरु सोच्नुहोला, यो कुनै खेल हो । सही उत्तर दियो भने पुरस्कार पाइएला । किनभने आजकल मानिसहरु बिना कुनै फाइदा केही पनि नगर्ने भइसकेका छन् । फाफुराको एक मित्र भन्छ,
के भन्नु भो ? हैन हैन, त्यो मित्र पत्रकार हैन । हैन, राजनीतिसंग पनि कुनै सम्बन्ध नै छैन उसको । उसो भए समीक्षक होला रे ? त्यो पनि हैन । खासमा भन्ने हो भने ऊ बैंकर हो । ऊ भन्छ, “खुसी हुनुभन्दा रिसाउन कति गाह्रो छ । शरीरका अनेकौं रसायनहरु सकृय हुन्छन् । मगजमा बल पर्छ । मांशपेशीहरु तन्किन्छन्, फुल्छन्, खुम्चिन्छन् । रक्तचाप बढ्छ, घाँटीमा जोड लाग्छ, आवाज ठूलो भएपछि त्यसको कम्पनले शरीरका सबै कुराहरुलाई असर पार्छ । एकछिन कसैलाई गाली गर्दा सारा कुराहरु क्षय हुन्छन् । त्यसैले आफूलाई नोक्सान हुने काम त गर्नै हुन्न । त्यो पनि फोकटलालमा ? सबै कुरा डेविट र क्रेडिट हो बुझिस् ?”
अनि त्यो सब बुझेको फाफुराजस्तो मानिसले सोधेको प्रश्नको सित्तैंमा उत्तर किन दिनू भन्ने तपाईंहरुलाई लागेको हो भने त्यो सोचको फाफुरा उच्चतम कदर गर्छ । तर हैन, तपाईंहरुसंग पनि फाफुराकोजस्तै खेर फाल्नलाई समय नै समय छ भने एकैछिन यो प्रश्नमा घोत्लिनुभए हुन्छ । फाफुराको यक्ष प्रश्न सुन्नुहोस्,
तपाईंहरुले यस प्रश्नको उत्तर सोचुन्जेलमा फाफुराचाहिँ रत्नपार्कको यो पारिलो घाममा एक ‘पावर न्याप्’ लिन भ्याउँछ है त ?
पावर न्यापपछि स्वागत छ यहाँहरुलाई फेरि एकपटक फाइँफुट्टीराजको फाईंफुट्टीमा । ब्रेकभन्दा पहिले फाफुराले यहाँहरुलाई एउटा प्रश्न सोधेको थियो, जे भए पनि असर नपर्ने यो संसारको सबैभन्दा बढी ‘बालै फरर’ मानिस को होे ? तपाईंहरुमध्ये धेरैको मगजमा यसको फरक फरक उत्तर आएको होला । कसैलाई लागेको हुनुपर्छ, काठमाण्डौका मेयर, कसैलाई लागेको हुनुपर्छ दुई तिहाइको सरकार, कसैलाई लागेको होला प्रहरी प्रशासन । स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु, बिभिन्न योजना परियोजनासंग सम्बद्ध टाउकेहरु, देशभर छ्याप्छप्ती पलाएका थरिथरिका सिण्डिकेटका ठालूहरु, निर्माण व्यवसायी लगायतका अरु पनि तपाईंको मगजमा आएका होलान् । ती सबै त भइ नै हाले, तर सबैभन्दा बढी बालै फरर चाहिँ हामी आम नागरिक नै हौं ।
भीमनीधि तिवारीले उही जमानामा एउटा नाटक लेखेका थिए, सहनशीला सुशीला । अब हामी सबैको राष्ट्रिय पहिचान बनेको छ यो नाम । आज हाम्रो देश सहनशील सुशील र सहनशीला सुशीलाहरुको देश बनेको छ । हामी सबै कुरा सहन अभ्यस्त भएका छौं । दिनदिनै बलात्कारका घटनाहरु भइरहेका छन् । कुनै बेला कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने देश अब बिस्तारै बलात्कारप्रधान देशको चिनारी पाउँदैछ । सरकार अपराधी लुकाउने र पोर्न साइट बन्द गर्नेमै सीमित छ । सरकारले भंग गरिएका भनेको सिण्डिकेटसंग वार्ता गरेर चाडको मुखमा मूल्यवृद्धिको दशैं बम्पर उपहार दिएको छ जनतालाई । संस्कृतिको सहरमा सँधै कुनै जात्रा हुन्छ । त्यस्ता जात्रा तथा गौरवशाली र राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुका लागि राष्ट्रपतिज्यूका सवारीका कारण काठमाण्डौको आवागमन ठप्प हुन्छ । मनमनै कुलर््िन्छौं, र सामाजिक संजालमा एक दुई गहन वाक्य लेखेर हामी सहिरहन्छौं । उपभोक्ता, अभिभावक, बिरामीलाई चारैतिरबाट चारपाटे बनाएर मुड्दा पनि हामी सहनशील सुशील र सहनशीला सुशीलाहरु सन्तुष्ट भएर बस्छौं ।
खासमा भन्ने हो भने विवेकशील साझाको साटो यदि बुद्धि पु¥याएर सहनशील साझा भन्ने पार्टी खोलेर चुनाव लडेको भए अरु सबैको जमानत जफत हुन्थ्यो । यही सोच्दासोच्दै कुनबेला फाफुरा रत्नपार्कमा भुसभुस निदायो भन्ने थाहै पाएन । उसले एउटा अचम्मको सपना देख्यो ।
“भोलिदेखि तिमीहरु सबैको जागीर चट् । बुझ्यौ ?”
बिना कुनै कारण अचानक त्यसरी गरिएको घोषणा सुनेर पनि सबै मौन रहे । उनीहरु आआफ्नो काम गरिरहे । तानाशाह दंग प¥यो । उत्साहित भएर उसले महामहिम फाफुरा र फस्र्ट लेडी फाफुरीलाई एउटा आमसभामा लिएर गयो । विशाल चौरमा गन्नै नसकिने संख्यामा मानिसहरु भेला भएका थिए । तानाशाहले त्यहाँबाट उद्घोष ग¥यो,
“तपाईँहरुले राम्ररी नसुनेका कि नबुझेको ? बिना कारण, बिना कसूर तपाईंहरु सबैलाई भोलि बिहान फाँसी दिइन्छ भनेको बुझ्नुभएन ?”
“बुझ्यौं । राम्ररी बुझ्यौं ।”
“तपाईंहरुलाई केही भन्नु छैन ?”
फाफुरालाई असह्य भयो । उसले फेरि एकपटक प्रयास ग¥यो,
निकै बेरपछि भीडको पछाडिबाट एउटा बूढो मानिसले हात उठायो । सबैले फर्केर हेरे । उसले बिस्तारै भन्यो,
फाफुरा उत्साहित भयो । कमसे कम एक जनाले त हिम्मत ग¥यो । झिल्का सानै भए पनि त्यसलाई फुक्न सक्यो भने त्यसले लप्कोको रुप लिन्छ । उसले हौस्याउँदै भन्यो,
“निर्धक्क भएर सोध्नुहोस् । के हो तपाईंको प्रश्न ?”
फाफुराले स्तव्ध भएर त्यो मानिसलाई हे¥यो । उसलाई त्यसको अनुहार कताकता परिचित लाग्यो । फाफुरा त्यस मानिसको नजीक गयो । अनि उसले थाहा पायो, त्यस मानिसको अनुहार त काटीकुटी फाफुराको आफ्नै भविष्य र वृद्धाअवस्थाको पो रहेछ ।
फाफुरा झसंग भएर ब्यूँझियो र चारैतिर हे¥यो । रत्नपार्क वरिपरि सबै आआफ्नै सुरमा थिए । ऊ बाहिर निस्क्यो र भीडमा सबैलाई नियाल्दै भौंतारिन थाल्यो ।
लापरवाह, निस्फिक्री र सन्तुष्ट भावमा देखिन्थे सबै सहनशील सुशील र सुशीलाहरु ।